Global Voices teny Malagasy » Jordania: Ny Bilaogin-dahatsarin’ny Mpanjakavavy Rania · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Novambra 2017 1:21 GMT 1	 · Mpanoratra Eman AbdElRahman Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Liva Andriamanantena
Sokajy: Jordania, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Nosaloran'ny Blogger Times , gazetibokin'ny bilaogy tantanan'ireo bilaogera Arabo, ny anarana hoe “bilaogeran-dahatsary Arabo malaza indrindra ” tao amin'ny YouTube ny mpanjakavavy Rania any Jordania taorian'ny fahombiazan'ireo andian-dahatsary tao amin'ny YouTube izay nalefany mba hiadiana amin'ny karazana fiheveran-diso mikasika ny Arabo.
Araka ity lahatsoratra ity:
Mipetraka ao amin'ny birao lehibe iray any Amman, Jordania, ny mpanjakavavy Rania ary misy fakantsary telo mitodika any aminy. Ho an'ny BBC ny fakantsary voalohany sy faharoa ary ho an'ny mpiasan'ny kabinetrany ny fahatelo. Nandrakitra ny fizarana farany tamin'ny fandaharany ireo fakantsary telo, izay nalefa tao amin'ny fantsona Youtube manokana, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Vlog (bilaogin-dahatsary). Ity ny andiany faha-7 tamin'ny lahatsariny hatramin'ny nanombohany nandefa lahatsary tao amin'ny YouTube tamin'ny volana martsa lasa teo. Miresaka amin'ny teny Anglisy izy ary mangataka ny mpijery mba hiresaka momba ireo karazana fiheveran-diso izay ren'izy ireo momba ny tontolo arabo mba hahafahany “manitsy izany rehetra izany”.
Tsy ny vadin'ny mpanjakan'i Jordania Abdullah II ihany no olona fanta-daza mampiasa ny Youtube, izay jeren'ny olona an-tapitrisany fa misy ihany koa ireo mpanao politika sy mpanjaka hafa avy any amin'ny faritra samihafa manerana izao tontolo izao izay namorona tranonkala manokana tao amin'ny aterineto.
Saingy ny tena nampiavaka ny mpanjakavavy Rania dia izy irery ihany no Arabo fanta-daza izay nampiasa ny aterineto mba hanombohana ny resaka miaraka amin'ny Tandrefana sy hampiroboroboana ny lahateny Islamika voafehy.
Hoy ny mpanjakavavy Rania nananihany hoe: “Olona tony izay manana natiora tsy dia be teny loatra ny zanakolahy, kanefa nahatsapa izy fa ” tsara ” ny kabariko, ary tokony ho tsara ihany koa ny fahatsapan'ny mpijery izany. “
Toa hita fa niombon-kevitra tamin'izany ireo mpitsidika ny YouTube, satria manodidina ny mpijery miisa 2 tapitrisa no nijery ireo lahatsary nahitana ny fandraisam-peony, ny fandraisan'anjara avy amin'ireo mpiangaly mozika isankarazany, mpanao hatsikana ary ireo olon-tsotra Jordaniana izay nalefa tao amin'ny TouTube.
Nahafahany nandrakitra ny fanehoan-kevitr'ireo olona an-tapitrisany ny fisehoan'ny mpanjakavavy Rania tao amin'ny fantsony tao amin'ny aterineto. Araka ny nolazainy tamiko hoe: ” Nisy olona nijery ahy toy ny hoe very saina tanteraka aho rehefa tonga tao an-tsaiko ilay hevitra.” Hoy hatrany izy nanohy, “tsapako fa ao anaty krizy ny tontolontsika ankehitriny, nisolo ny fifanakalozan-kevitra ny herisetra ary nisolo hatezerana ny fangoraham-po.” Manantena aho fa ho lasa fantsom-pifandraisana sy ho tetezana manelanelana ny Atsinanana sy ny Andrefana ity fantsona ity satria tena miaiky tanteraka aho fa mila izany tokoa ity izao tontolo izao-ntsika ity. “
Azonao atao ihany koa ny mijery ireo lahatsarin'ny mpanjakavavy Rania mivantana ao amin'ny fantsony (lahatsary).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/11/09/110255/
 fahombiazan'ireo : https://fr.globalvoicesonline.org/2008/04/01/419/
 fantsony : http://fr.youtube.com/queenrania